आकर्षक पर्यटकीयस्थल बन्दै चतराको कोशी पुल - नेपालबहस
आकर्षक पर्यटकीयस्थल बन्दै चतराको कोशी पुल
देवेन्द्र कार्की : रासस
| १५:५६:२१ मा प्रकाशित
२९ माघ,धरान । पूर्वी नेपालसँग सडक सञ्जाल जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा रहेको चतरास्थित सप्तकोशीमा आधुनिक पुल निर्माण भएपछि यो क्षेत्र एउटा आकर्षक पर्यटकीयस्थल बनेको छ । साथै स्थानीयवासीका लागि वनभोज खाने एक आकर्षक स्थान पनि बनेको छ ।
यतिबेला पुल आसपासमा वनभोज खान र डुङ्गा (बोट) चढ्न आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा पाँच वर्षअघि पुल निर्माण भएपछि यहाँ आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको हो । पुल हेर्नकै लागि पनि धरान, विराटनगर, इटहरी, गाईघाट, बेलटार, फत्तेपुरलगायत स्थानबाट स्थानीयवासी आउने गरेका छन् । कोशी पुलदेखि वरपर आधा दर्जन स्तरीय होटल सञ्चालनमा रहेका छन् भने अरु आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय नागरिकले यहाँका स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
हिजोआज दैनिक करिब ५०÷६० जना पर्यटक पुल हेर्नकै लागि मात्र यहाँ आउने गरेको स्थानीय व्यापारी शरद कोइराला बताउछन् । आफ्ना कामले पूर्वपश्चिम यात्रा गर्ने यात्रु पनि केही समयसम्म सवारी रोकेर तस्वीर खिच्ने र यसो रमाउने गरेको देखिन्छ । पुल नजिक कोशी किनारमा वनभोज खानेको भीड लाग्न थालेको कोइराला बताउछन् । पुलमुनिबाट केही वर्षदेखि जेटबोट पनि सञ्चालन भएको छ । यो बोट बराहक्षेत्र, सिम्लेसम्म पुग्ने गरेको छ । उदयपुर, सप्तरी, भोजपुर, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, सप्तरीबाट जेट बोट चढ्न र वनभोज खान आउने गरेको उनी बताउछन् ।
सामाजिक सङ्घसंस्था, विद्यालय र साथीभाइ समूह बनाएर कोशी पुलमा वनभोज खान आउनेको सङ्ख्या पछिल्लो समय निकै बढेको बेलका नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष जयकुमार राईले बताएका छन् । वनभोज खानेको सङ्ख्या बढेपछि बेलका नगरपालिकाले उक्त क्षेत्रमा शौचालय तथा अन्य आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गरिदिएको छ ।
स्थानीयवासी मोहन खड्काका अनुसार शनिबार १०० भन्दा बढी समूह वनभोज खान आउने गरेका छन् भने अन्य दिन दैनिक पाँचदेखि सात वटासम्म समूह वनभोज खान आउने गरेका छन् । वनभोज खान आउनेहरु यसैमा मात्र सीमित नभएर बोट चढ्ने, कोशी नदीमा पौडी खेल्ने र नाचगान गरेर मनोरञ्जन लिइरहने मानिसको जमघट दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको खड्काले बताएका छन् ।
धरानबाट पारिवारिक वनभोजमा गएकी इन्दु खड्काले कोशी पुल वनभोजका लागि उत्तम गन्तव्य भएको बताएका छन् । “बोटिङ, फिसिङ, स्वीमिङमा यहाँ रमाउन सकिनेरहेछ । अझ प्याराग्लाइडिङ गर्नेहरुका लागि पनि सुविधा रहेकोले धेरै मजा आउँछ”, गत शनिबार वनभोजस्थलमा भेटिएकी खड्काले भनीन् ।
खानेपानी र फोहर व्यवस्थापनको समस्या
दैनिक आन्तरिक पर्यटक वनभोज खान आउने गरे पनि वनभोज क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव छ । खोलाको बगर भएका कारण बसेर खानेकुरा पकाउने, खानका लागि असुविधा हुने गरेको वनभोज आउनेहरुले बताएका छन् । जेट बोट पनि त्यही किनाराबाट लाग्ने भएकाले ती स्थानमा वनभोज खानेहरु बढेका हुन् । तर स्थानीय सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वनभोज खानेहरुले थोरै दुःख व्यहोर्नु परिरहेको छ । यसमा स्थानीय पालिकाको ध्यान पुग्नुपर्ने वनभोजमा सहभागीहरुले भनेका छन् ।
स्थानीय सरकारको बेवास्ताले गर्दा वनभोजस्थल वरपर खाली पानीको बोतल, मदिराका बोतल, खानेकुराको फोहरको डङ्गुर हुन थालेको छ । ती फोहरको उचित व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । वनभोजमा आएर नाचगान गर्ने, फराकिलो ठाउँको अभाव छ । भिरालो जग्गा भएका कारण दुःखले वनभोज खाने गरेका छन् । बिजुलीको समेत व्यवस्थापन नहुँदा वनभोज आउनेहरुले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपरेको छ ।
वनभोजस्थलमा आकर्षक उद्यानसहितको डिपिआर तयार
बराहक्षेत्र गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष जयकुमार राईका अनुसार प्रदेश सरकारको सहयोगमा कोशी पुलदेखि केहीमाथि सप्तकोशी किनारमा सुविधा सम्पन्न वनभोजस्थलको डिपिआर तयार गरिएको बताएका छन् । करिब ५० सवारी अटाउने पार्किङ क्षेत्र, १०० वनभोजस्थल ९पिक्निक स्पर्ट०, सेल्फी स्टेशन, फिसिङ क्षेत्र, बोट चढ्न जाने बाटो, खानेपानीको व्यवस्थापनसहितको डिपिआर बनाएर प्रदेश सरकारलाई पठाइएको छ । आगामी वर्षको पर्यटन शीर्षकको बजेटबाट सबै निर्माण गरिने अध्यक्ष राईले बताएका छन् । “तत्काल व्यवस्थापनका लागि वनभोजस्थल व्यवस्थापन समिति बनाउने तयारी भइरहेको छ । शौचालय निर्माण गरिसकिएको र तत्काल खानेपानी र फोहर व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ”, अध्यक्ष राईले बताएका छन् ।
वनभोजमा आउनेका लागि जेट बोट आकर्षण
बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन प्रालिले सुनसरीको बराहक्षेत्र–१ चतराबाट भोजपुर, उदयपुर र धनकुटाको सङ्गम सिम्लेसम्म जेट बोट सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसले शुरु गरेको चतरामा हाल चारवटा कम्पनीले सातवटासम्म सानो ठूलो बोट सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
वरुण वाटरवेज, बराहक्षेत्र मरिन एण्ड रिसोर्ट र बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन सेवा प्रालि गरी चार कम्पनीले साना ठूला गरेर सातवटा जेट बोटबाट कोशी पुलदेखि बराह क्षेत्र हुँदै भोजपुर, धनकुटाको त्रिवेणीघाट र सिम्लेसम्म सेवा दिँदै आएका हुन् । करिब १८ देखि ६० जनासम्म अट्ने बोट सप्तकोशीमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सोही बोट चढ्न पनि कोशीपुलमा आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गर्छन् ।
चतराबाट १० किलोमिटर हाराहारीको सिम्ले पुग्न पाँच मिनेट लाग्छ । सिम्लेबाट भोजपुरको घोडेटार क्षेत्र एक घण्टामा पुगिन्छ । सडक यात्रा गर्दा भने घोडेटार पुग्न दिनभर नै समय खर्चनुपर्ने हुन्छ । सिम्लेबाट धनकुटा सदरमुकाम, भेडेटार हुँदै आउँदा सात घण्टा लाग्नेमा अब जेट बोटबाट चतरा आएर सिधै दुई घण्टामा यात्रा गर्न सकिन्छ । शनिबार जेटबोटबाट सिम्लेसम्म पुग्ने १० जनाभन्दा बढीको समूह हुने गरेको छ । शनिबार जेट बोट मात्र चढ्न रहर गर्नेलाई दुई किमीमाथि कोप्चेसम्म घुमाएर ल्याएको बोटले प्रतिव्यक्ति रु ३०० लिने गरेको छ । सिम्लेसम्म पुग्न भने रु ८०० भाडा लाग्ने बोट चालक राजेश चौधरीले बताएका छन् ।
उदयपुरको मैनामैनी र सुनसरीको बराहक्षेत्र जोड्ने चतरामा पुल सञ्चालनमा आएसँगै हेटौँडाबाट पूर्व क्षेत्रमा जाने वैकल्पिक बाटो पनि खुलेको थियो । पुल सञ्चालन भएपछि धरान, चतरा, गाईघाट, कटारी, सिन्धुली तथा हेटौँडा सहजरूपमै जोडिएका छन् । सोही सडकलाई सरकारले मदन भण्डारी राजमार्गको रुपमा विस्तार गरेको छ । रु ७६ करोड ११ लाख लागतमा कोशी पुल बनेपछि यहाँ चहलपहल बढेको स्थानीय बताउँछन् । दुई सय ६१ दशमलव तीन मिटर लामो यो पुलमा तीनवटा पिलर रहेको उच्च प्रविधिको पुल रहेको कालिका कन्स्ट्रशनले जनाएको छ । यो प्रविधि कर्लाणी पुलमा पनि प्रयोग भएको बताइएको छ ।
बोपताङ डाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ
कोशी पुलबाट करिब तीन किमी पश्चिम बोपताङ डाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ उडान हुँदै आएको छ । नेपाल प्याराग्लाइडिङ एण्ड ह्याङ ग्लाइडिङ सङ्घले राष्ट्रिय खेलकूद विकास समितिको सहयोगमा एक वर्ष अघि प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण उडानपछि सङ्घको सहयोग र बुढासुब्बा प्याराग्लाइडिङ धरानको समन्वयमा नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिएर यसको उडानका लागि तालीम प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन ल्याएको छ ।
सो प्रशिक्षण केन्द्रले बोपताङ डाँडाबाट बेलायतका एक प्रशिक्षक पेट ग्यलेगरले उदयपुरका एक, पोखराका तीन, पाल्पाका एक र धरानका एक जना गरी छ जनालाई आधारभूत तालीम दिइसकेका छन् । उदयपुरको आकाशमा बोपताङ र चम्पाकोट डाँडाबाट यो खेल खेल्न सकिन्छ । बोपताङ डाँडा समुद्र सतहदेखि ५१० मिटर र चम्पाकोट डाँडा समुद्र सतहदेखि ७०० मिटरको उचाइमा रहेको नेपाल प्याराग्लाइडिङ एण्ड ह्याङ ग्लाइडिङ सङ्घ सुनसरीका सचिव विकास आचार्यले बताएका छन् । उनका अनुसार उडान गर्दाको एलिभेयसन बोपताङ डाँडाबाट ४५० मिटर र चम्पाकोट डाँडाबाट ५५० मिटर भन्दा बढी रहेको छ ।
प्याराग्लाइडिङ अवतरण गर्ने स्थल कोशी किनार सामुदायिक वन क्षेत्रको सिसौली चौरदेखि बोपताङसम्म कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ । बनभोजमा रमाउन आउनेहरुले मौसम खुलेका बेला प्याराग्लाइडिङको मजा लिने गरेका छन् ।
आन्तरिक पर्यटकलाई बराह क्षेत्र दर्शनको अवसर
यहाँ वनभोज खान आउनेहरु नेपालका चार ठूला धाममध्येको बराह धामको दर्शन गर्ने अवसर पाउने छन् । कोशी पुलबाट उत्तर करिब दुई किमी जेटबोटबाट पाँच मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । सडक मार्गबाट चार किमी बाटो १५ मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । त्यहाँ बराह भगवानको दर्शन गरेर नजिकको क्षेत्र घुमघाम गरेर फर्कन सकिन्छ ।
नेपालमा रहेका प्रशिद्ध चार धाम सप्तकोशी किनारमा रहेको बराह क्षेत्रधाम, बागमती नदी किनारमा रहेको पशुपित क्षेत्र, कालीगण्डकीको शीर मुक्ति क्षेत्रधाम र कालीगण्डकी किनारको ऋषिकेश क्षेत्र धाम धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण मानिदैँं आएका छन् । धार्मिक पर्यटन र जलस्रोतको अपार सम्भाव्यता भएको यो क्षेत्र साहसिक र मनोरञ्जनात्मक खेल प्रर्वद्धन दृष्टिले पनि प्रचुर छ । बराह क्षेत्रलगायत कुम्भ नगरी प्राचीन हरिद्वार, औलिया मठ, रामधुनी, छिन्नमस्तालगायत धार्मिक तीर्थ, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना, चतरा हाइड्रोपावर, पूर्वपश्चिम वैकल्पिक लोकमार्गका कारण पनि यो क्षेत्र आकर्षक बन्दै गएको छ ।
ढुङ्गाको छानो भएको गुरुङ समुदायको घर ५ दिन पहिले
रारा तालमा दुङ्गा चढेर रमाउँदै पर्यटक ५ दिन पहिले
पर्यटक आउन थालेसंगै लयमा फकिर्दै काउलेपानी घरवास ५ दिन पहिले
फेब्रुअरीमा पर्यटक आगमनमा झिनो सुधार ६ दिन पहिले
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा महिला चेम्बरको विशेष कार्यक्रम, व्यवसायीहरू सम्मानित ११ घण्टा पहिले
महाधिवेशन सरे कांग्रेस समाप्त हुन्छः नेता भण्डारी १५ घण्टा पहिले
महिलाविरुद्धको हिंसाका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिन्छः प्रधानमन्त्री १७ घण्टा पहिले
महिलाको सशक्तीकरण, रोजगारी र शिक्षामा मुख्यमन्त्री राउतको जोड १६ घण्टा पहिले
नागरिकताका लागि जनप्रतिनिधिको सहजीकरण २० घण्टा पहिले
पन्ध्र दिनदेखि बेपत्ता वृद्ध दम्पतीको व्यापकरुपमा खोजतलास ! १५ घण्टा पहिले
यी तीन कम्पनीको शेयर भर्ने आज अन्तिम मौका ५ दिन पहिले
कृषि व्यवसाय गर्ने युवालाई बिनाधितो कर्जा ६ दिन पहिले
अनुमतिपत्रविनै चल्छन् ट्याम्पु र इरिक्सा ६ दिन पहिले
सल्लाघारी लिएर आईन गायिका रानी शाक्य २ दिन पहिले
सेना र सशस्त्रबीच टसल पार्न खोजेको हो कि, सेनाले सीमा सुरक्षाको स्वामित्व लिन खोजेको हो ? ५ दिन पहिले
नेपालमा मंगलबार थप ७८ जना कोरोना संक्रमित ६ दिन पहिले
अफगानिस्तानमा २४ घण्टा यता भएका हिंसामा परी ९० जनाको मृत्यु ४ दिन पहिले
कांग्रेस अहिले सत्तामा जान उपयुक्त छैन : नेता केसी ४ दिन पहिले
दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरु पेरिसडाँडामा २ हप्ता पहिले
अमेरिकाले जोन्सनको खोपलाई दियो अनुमति १ हप्ता पहिले
फाइजरको खोप ९५.८ प्रतिशत प्रभावकारीः इजरायली स्वास्थ्य मन्त्रालय २ हप्ता पहिले
अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला १५ डलर पुर्याउने प्रस्तावमा सहमति जुटेन २ हप्ता पहिले
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पनि बर्ड फ्लु देखियाे २ हप्ता पहिले
ओली सर्वोच्च अदालतमा पुगे ३ हप्ता पहिले
एकैपटक ३१ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन २ हप्ता पहिले
बाँकेमा कोरोनाले ७० बर्षीया बृद्धाको मृत्यु ६ महिना पहिले
‘डबल डीजीट’को पहिरो जाँदा पनि प्रभु बैंकको शेयरमा लगानीकर्ताको आँखा १ वर्ष पहिले
काठमाडौंमा पार्किङ कहाँ गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ ? अब नो टेन्सेन ! २ वर्ष पहिले
आज विवाह पञ्चमी, श्रीरामचन्द्र र सीताको पूजा आराधना गरी देशभर मनाइँदै ३ महिना पहिले